I-Sound Sound: I-Monitor Monitoring 101 - Ukugcina iBhodi iyolo
Ukuzilibazisa kunye Nemisebenzi Ukurekhoda Kwekhaya
Ukujongana nokuxuba 101
Ukugcina Iqela Eliyolo
Ukucinga emva kweminyaka embalwa, njengabaninzi abanonophaphuli bezandi, ndingazi kakuhle ukuba ndingazilungelelani ukuba ndidibanise iindlebe kwiimpawu zam kuqala zokuqala. Ngokuqinisekileyo, ndade ndadlala nayo, kodwa andingazi kakuhle ukuba ndingazilungelelani. Ndineeveki ezimbalwa ukuya kwindwendwe yam yokuqala njengexesha elizeleyo, unonkontileka wokwenene kwindlela yokutyelela ibhajethi, kwaye ndayimisa ibhodi phambi kwendlu ephakamileyo. Ukuphendula yonke indawo! Ndaphoswa. Nangona kudibanisa indlu enkulu, iindlebe zam zibeka i-damper kwi-show ukusuka kumzuzu wokuqala.
Abagadi bokudibanisa banokudideka ngokwenene, kwaye akulula nje ukuguqula umxube kwaye uyishiye-kwaye ukuxutywa kwee-monitores ezimbi ngenye yezizathu zokuqala ezikhankanywe kwimbonakalo embi ngamaqela amaninzi. Njengomninimzi ophilileyo, abaxakeli bokuxuba yinto onokuza kufikelela kuyo. Makhe sibone indlela elula yokuqinisekisa ukuba abadlali bakho bayavuya.
Ukuba udibanisa kwibhola elincinci, amathuba abajongi baya kuxutywa phambi kwekhonsoli yendlu. Uya kuthumela i-monitor mix mixing, okanye uyathumela. Imveliso yabathumelayo-nangona kunjalo uninzi okhululekileyo-uya ku-amplifier yamandla, eqhotyoshelwe kwisithethi esisezantsi. Injongo yale, yinyani, ukuba abadlali beesiteji bazive bebhetele.
Ingxenye yokuqonda oku kuqonda ukuba ngubani umntu kwisigaba esiya kufuna ukuva. Okona kuncinci, kuya kufuneka bave ukuba zeziphi izicwangciso ezingenakuzizwa ngokwemvelo, kunye nebhola elikhulu elinamaqela omlambo, uya kufumanisa ukuba oku kuthetha umxube kuphela.
Kwizigaba ezinkulu, unokwenza i mix mix full.
Uninzi lwabatshabi bavame ukufuna yonke into ekuxubeni kwabo, ngokugxininisa kwisigubhu sokukhaba, ibhitari, kunye nawaphi na ama-guitars onstage. Abagitare bavame ukufuna nawaphi na amanye ama-guitar onstage kwi-mix mix, kunye ne-drum enkulu yokukhaba kunye namazwi. Abassists bavame ukufuna iidrama ezininzi zokukhaba kunye negitala.
Vocalists? Masithi nje, bathanda ukuziva. Kwaye kuninzi. Enyanisweni, ukuhlala kubhetele kukubuza umqhubi oko bakukhethayo kumxube baze basebenze apho.
Ukulawula Umthamo weNqanaba
Kwiqela elincinci, uya kuhlala ulwa nomlinganiselo wesigaba. Ukufumana umxube ocacileyo kwindlu kunzima ukuba unobhenqo lwegitare kunye neergeji ezinkulu, kunye nento yonke ngokukhawuleza ukukhawuleza ukuzama ukuhlawula yonke into ngomthamo.
Ukuqinisekisa ukuba iigitare zigcina isigaba sawo sezantsi siba luleke kakhulu kuba i-amps zabo zivame ukuba zivakalise kakhulu. Ndihlala ndixelela abaculi ukuba baqale ukudlala njengothambileyo njengokuba banako kwaye bafumana ithoni yabo ekhethiweyo, ngoko babone ukuba bayakwazi ukunyanzela into encinane. Ngamanye amaxesha baya kuthi, ngamanye amaxesha abayi kuba. Nangona kubonakala ngathi kunzima, ndiya kubakhumbuza ukuba kubonakaliso lwabo - kwaye ekugqibeleni isandi sabo - kwaye ukuba bafuna ukuyichitha, abanamkelekanga. Oku ngokuqhelekileyo kufumana ukuhlukana-hlukana kwemilinganiselo kwinqanaba lomgangatho.
Into yokuqala ofuna ukuyenza ngaphambi kokuba nawuphi na owenzayo afike apho kukho iindwendwe. Ukukhupha iindwendwe kuyindlela elula yokunciphisa impendulo. Impendulo yenzeka xa iifom ze-loop phakathi komthombo wesignali (kulo mzekelo, imakrofoni) kunye nomthombo wesiphumo (kulo mzekelo, umlenze wokubeka esweni), kwaye yinto nje, intlungu ekujongene nayo.
Siza kuthatha ukuba u-EQ ogqityiweyo ufakwe kwisiphumo somxube ngamnye wokujonga. Ukuba awunjalo, ezi zihlengahlengiso ziya kuba nzima. Unako ukufeza into efana nokusika iifom kwi-channel master, kodwa qaphela ukuba ezo zitshintsho ziya kuthintela ukuxuba indlu.
Qala ngokuguqula enye imakrofoni - i- microphone ehambelanayo , efana noko uza kusebenzisa kulo lonke isigaba - kwelinye lalavayi kuze kube yilapho iqalisa impendulo, ezwakala ngathi i-vibration ephezulu okanye ephantsi. Xa iqala ukuphendula, nciphisa ukuba imvama kwi-EQ yegrafikhi kude kube yinto engasondli. Gcina lo msebenzi uze usebenzise isamba esikhulu senzuzo kwimakrofoni kwi-wedge ngaphandle kwengxelo. Kodwa phawula-phatha kakhulu, kwaye uya kubulala i-dynamics ye-wedges.
Ndiyakuthanda ukuqala nomculi wokuqala.
Qala ngokumcela ukuba adlale isigqomo sakhe sokukhaba. Buza kuwo wonke umgangatho ukuba ubani ufuna i-drum yokukhaba ngaphezulu - kwaye baninzi, baya kwenza. Vala ukukhaba kumxube ngamnye kuze kube yilapho wonke umntu evuya. Ngamaxesha amaninzi, abayi kufuna nayiphi na into yomdubhu ekuxubeni kwabo; ukuba bayakwenza, baya kukuxelela. Emva koko, uye kwii-bass. Uninzi lwabatshabi - kunye ne-bassist ngokwabo-baya kufuna ininzi yegitala kwimxube yabo. Nantsi ingongoma enhle: Ndidla ngokuqhuba ibhokisi ye- DI phakathi kwe- basitar yangempela kunye ne-player amp, kwaye usebenzise loo mqondiso kumabini naphambi kweendlu. Ukubeka i-bass amp indlela efanelekileyo yokufumana ithoni epheleleyo, kodwa ukuba uhlala kwiklabhu encinane, ithoni yinto encinci yeengxaki zakho - ufuna ukuva inkcazo, kwaye unokulawula kuwo onke amagosa kunye indlu.
Emva koko hamba u-vocalists. Gwema ukusebenzisa i-compression kubahloli, kuba oku kukhuthaza ngokwenene indlela yam mic for most vocalists. Ukuxubusha amagama kwi - mix -ear- mix mix kubalulekile, kodwa akuyimfuneko kwimida. I-guitar Acoustic yinto elandelayo yokungena kuyo ukuba i-onstage. I-vocal and acoustic ngokubanzi ikhuphisana neyona nto ininzi, kwaye ke ithambekele kwingxelo. Igarari yamagesi ayiyi kufuna kakhulu, ukuba ikhona, kwiindwendwe, nangona akuyona into embi ukuyibuza. Ngamanye amaxesha, i-soloist ye-solo-player iyayidinga impawu zayo kwinqanaba.
Khumbula, yonke imeko ihluke, kwaye ukuqhuba kwenza ukuba uphelele.
Ubunye Buni Ubuncwane?
Amakhulu amahlanu amakhulu angaphantsi kwama-$ 200
Iimfesitraki eziphambili kunye neeFree Filters
Yonke Inqanaba lokuLawulwa kweNqanaba
Indlela Yokuqalisa Iseshingi sePro Tools
Ukuxuba iiDrum kwiiPro Tools
Indlela Yokurekhoda Ikhompi Ephilayo
Funda indlela echanekileyo yokuguqula i-Milliseconds kwiSampuli
Oko Kufuneka Ukwazi Ngokufunda Okukude
Iingcebiso zeProgram zokufundisa
Ukuguqulwa kweMerika: iMfazwe kaPaulus Hook
Iphutha lokuhlanganisa (amagama)
Indlela yokutshintsha ii-Pake Brake Pads ze-Brakes ze-Disc
Izidumi ezili-10 ezidumileyo ezidlala umbhoxo
Abani Aryans? I-Mythology yokuqhubekayo kaHitler
Iimpawu ezinomdla kunye neenkcukacha ngokuphathelele abantu baseMelika baseMelika
Ukujonga umsebenzi we-OJ Simpson kunye noBomi
Ukucinga Okufanelekileyo - Se benzisa ukuze Ufumane Oko Ufuna
Indlela yokubala iWing Loading
Iimpawu zeSpookiest ezivela kwiLatural Literature
Amanqaku angama-923 eBarack Obama
Imfazwe Yehlabathi II Iizindiza: Heinkel Yena 111